WhiteSource Inoburitsa Nyowani SCA Software Yekuchengetedza | Linux Vakapindwa muropa
WhiteSource yakatanga software nyowani yekuongorora kana SCA tekinoroji neChipiri rapfuura iyo yavakadaidzira kuti inoshanda yekuongorora Nayo, ivo vanovimbisa kudzikisira kusagadzikana mumapurojekiti esoftware ne70%, chipikirwa chinoda chinzvimbo chinofanira kumirira kana chichiita sezvavanotaura uye nekudzidza zvakawanda nezvazvo. Uye zvakare, ivo zvakare vanovimbisa kuongorora zvinhu zvinopfuura iko kunyorera kana software yakaongororwa, kuenda kusvika pakuzvishandisa pachezvayo uye kuongorora zvinoitika mukuchengetedzwa kwechishandiso.
Iyo kambani nekudaro inoda kudzidzisa makambani kana vagadziri veesoftware yechishandiso chiri nani kushandisa simba reakavhurika sosi. Mhedzisiro yacho inofanira kuve zvikumbiro zvakachengeteka zvakanyanya iyo yatinogona kunakidzwa munguva pfupi iri kutevera. Uye ndezvekuti kushandiswa kweyakavhurika sosi software kwakakwira uye iine iyo nhamba yemaziso ekuzivikanwa kwekusaziva kweiyo software. Kuti vaite izvi, ivo vanoenda nhanho inopfuura tekinoroji yazvino inongo ganhurira ivo pachavo pakuona ruzivo nezve izvo zvingangove zviri panjodzi zvikamu zve software.
Uye izvo nhau tiri muchirongwa chitsva ichi here? Zvakanaka, zvakanyanya kuongororwa kwekushandisa kwakanaka kunoshandisa nzira nyowani yekuongorora iyo inosanganisira kuongorora kodhi yemutengi, kuongororwa kwekuti kodhi iyi inopindirana sei neyakavhurika sosi yezvinhu, inoratidza kana kusasimba kwacho kuchinyatso kutaurwa nekodhi yakatarwa uye kunoratidza uko zvinoitika. Zvese izvi zvekutenda mukubatanidzwa kweanoverengeka epamberi akajeka ongororo algorithms ayo anogona kubatwa kubva kune graphical interface.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WhiteSource Inoburitsa Nyowani SCA Software yeKuchengetedza